Ixesha lotshintsho olukhulu kunye nokujika okukhulu: sayina uxwebhu lwezikhalazo: Martin Vrijland
I MI ZEKELO
UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO
Ixesha lotshintsho olukhulu kunye nokujika okukhulu: sayina uxwebhu lwezikhalazo
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Meyi 2020	• 22 Comments
Ingxaki ye corona inyanzelisa ukuba sicinge ngotshintsho. Sele ndiyibhengezile emva kokuba iwebhusayithi yam iphantsi kohlaselo lwe-DDoS kwisiqingatha semini. Ndenze intetho engekho ngqiqweni isithi: "Isicwangciso sam kukuhambisa iiplani zekhonkrithi kungekudala ukuze sijongela phantsi lo rhulumente kunye nenkqubo yonke."
Ndisebenzile kweso sicwangciso ixesha elide kwaye ndiyasibonisa kubantu abaninzi emva kwezigcawu. Sisicwangciso esimalunga nedemokhrasi ethe ngqo, ngenkqubo yokuvota ekhuselekileyo esebenzisa ubuchwepheshe be-blockchain.
Ewe, kukho iingozi kwitheknoloji, kodwa eyona ngozi inkulu ihleli kwipiramidi yamandla. Le nkqubo idinga ukulungiswa kwaye iguqulwe. Oku kunokwenzeka kuphela ukuba ucwangciswe kakuhle. Amandla akufuneki aye kwindawo ephakathi, kodwa amandla kufuneka aye ebantwini.
Siza kuyenza ngokwahlukileyo!
Kwahluke ngokupheleleyo! Kwaye uncedo lwakho luyafuneka. Imibuzo embalwa kuqala:
Ngaba uyafuna ukuba wena okanye abantwana bakho nihlale kwintolongo edijithali?
Ngaba uyafuna ukuba wena okanye abantwana bakho ninyanzelwe kwisitofu sokugonya eningazi ukuba siqulathe ntoni ngaphandle koko kuxelelwa "ziingcali?
Ngaba uyafuna ukutyhalela kwinkqubo yobukomanisi exhomekeke kurhulumente apho yonke into ibekwe esweni ngeDatha enkulu?
Hayi? Ngoku lixesha lokuba uguqule inkqubo njengoko sisazi! Ixesha lelizwe elikhululekileyo elinedemokhrasi ethe ngqo: indlela entsha yokuhlala kunye. Ixesha lokususa ikhaphethi kwikhaphethi kunye nesithsaba.
Inkqubo endala isekwe kwintando yesininzi yobuxoki, apho bonke oopopu kumaqela ezopolitiko babonakala ngathi baqeqeshiwe ukuba basebenze isithsaba kuphela kwaye banike abantu umbono okhethiweyo.
Banika ukhetho oluhambelana nelo qela lazo zonke izimvo kunye nalo naluphi na unxibelelwano kuluntu kunye nengxoxo-mpikiswano ngokubonakala ngathi kuyaphikiswa ukukhusela amandla afanayo kunye ne-ajenda engemva kwezigcawu.
Inkcaso, ekhohlo, ekunene, kwinkululeko, bonke bafunga ukuthobeka kwisithsaba kunye neengxoxo ezothusayo kwimidiya, iingxoxo ngexesha lonyulo; Zikhona kuphela zokwenza abantu bakholelwe ukuba ilizwi labo liviwe.
Idemokrasi njengoko besisazi ukuba bonke ubomi bethu kukude. Siphila kwi-hypnosis edibeneyo, ubumfama obuhlanganyelweyo.
Kholelwa ukuba ingenziwa ngokwahlukileyo
Kuba siphila kwinkqubo yentlalo kwasebusheni, asazi ngcono. Yimeko yethu esinamathela kuyo.
“Sifuna urhulumente kwaye idemokhrasi yeyona ndlela ilungileyo. Okona kucwangciswe okwikhulu, kokukhona ziyafana izivumelwano kwaye ziluncedo ”, sicinga.
"Ke wonke umntu usebenzisa i-asphalt efanayo, sinezithuthi zikawonke-wonke ezifanelekileyo, irhafu ilungelelaniswe kakuhle kwaye sinolungelelwaniso oluhle kuzo zonke iindawo zobomi bethu."
Kwabanye, i-Emperor ngokwenene inxibe iimpahla
Abanye abantu ababoni ukuba i-Emperor ayinxibi mpahla. Bakholelwa ngokuqinile kwinkqubo njengoko sisazi kwaye abaninzi baxhomekeke kwaye bayayithanda ngokupheleleyo.
Kungelo xesha kuphela lengxaki yekorona apho abanye baqala ukubona ukuba ngokuthe ngcembe siyaqhelaniswa nenkqubo yobukomanisi. Abanye baya kuyibona le nto njengenkqubela phambili eyimfuneko; Inkqubela phambili enokugcinwa ukuze kuthintelwe ubhubhane kwixa elizayo kwaye ugcine indalo.
Kodwa ngaba oko kufuna ukuba inani labantu libekwe kwiwebhu yolawulo lwetekhnoloji okanye uninzi lweengxaki zehlabathi zibangelwa ngabantu abalambele amandla abazityebi benza imali ngamayeza, ioyile, imveliso yobuninzi njalo-njalo?
Isithsaba, indlu yethu yobukumkani
Indlu yethu yobukumkani idlale indima entle koku. Betyala amandla abo kunye nemali eyintloko ngokuyintloko ekukhupheleni kwezinto ezingagalelwanga kunye neoyile. Emva koko asithethi ngezinto ezimnyama ezivela kwixesha elidlulileyo.
Kwaye ezopolitiko zifunga bani ukuba ziya kuthembeka? Kwisithsaba. Bafunga ukuba baya kuxhomekeka kwibhlokithi yamandla etywina yonke imithetho nokuba abagwebi, amagosa, amagqwetha namapolisa afunga ukuba aya kuhanahanisa. Abafungi ukunyaniseka ebantwini, kodwa kwisithsaba.
Isithsaba silawula "ngobabalo lukaThixo". Akukho mntu unokubonisa ukuba lubabalo lukaThixo kwaye amandla eyimpumlo ye-wax.
Yinkqubo yenkolelo apho wonke umntu ekuhlaleni, kuba abazali kunye nootatomkhulu noomakhulu, usapho kunye nabahlobo: Wonke umntu ukwimeko yobuxoki obufanayo kwaye ke akukho wazi ngcono.
Singaqhubeka nokuxhomekeka kwinkqubo ekhoyo, ethi ikhule ngokubhekele phaya ukuba singathemba na ukuba ukuba siyazibhatala, singazilungiselela izinto kakuhle. Asinakho ukulahla zonke izibonelelo zobugcisa esiziqhelanisa nazo ngexesha elinye, asinakuba sonke ngequbuliso siphile ngaphandle koncedo kunye nombutho. Nangona kunjalo sinako, ukubuyisela ulawulo lwayo kunye nemigca yokwenza izigqibo.
Urhulumente kufuneka abenabameli bokwenyani babantu abafunga ukungathembeki kwisithsaba, kodwa ebantwini. Ubuntu kufuneka bube nelizwi elithe ngqo kwizigqibo. Ngaba uyakholelwa ukuba oko akunakwenzeka, kuba abantu abaninzi banolwazi oluncinci kakhulu ngezinto ezininzi ezahlukeneyo? Yimpikiswano elungileyo leyo, kodwa mhlawumbi izinto ezininzi zifuna ukwenziwa lula.
Ukuba abantu abafuni ukunyuka kwenqanaba, ngoko akuyi kubakho ukunyuka kwesikali. Ukuba abantu bacinga ukuba imidiya iqala ukubonakala ngakumbi njengengxelo-ke, kuya kufuneka iguqulwe ibheke phezulu. Ukuba abantu abafuni kubalwa, akuyi kubakho luhlolisiso. Njalo njalo, njalo njalo.
Ukuguqulwa kwesakhiwo samandla
Kodwa yonke into iqala ngokubuyisa imigca yamandla. Kufuneka bahambe baye ebantwini endaweni yesithsaba. Bamele babalekele emntwini; eluntwini. Abalawuli abonyulwe ngokuthe ngqo ebantwini kufuneka banyulwe ngeevoti ngqo kwaye bafunga ngokunyaniseka ebantwini. Kananjalo bonke abagwebi, abasebenzi bakarhulumente, amapolisa, umkhosi, abameli, njl. Bonke kufuneka bafunge ukuthembeka ebantwini kwaye konke kungahlulwa sisininzi.
Idemokrasi ngokuthe ngqo
Idemokhrasi ethe ngqo inokwenziwa yenzeke ngetekhnoloji. Itekhnoloji yeBlockchain inokuqinisekisa ukuba unokuvumela izwi labantu ukuba lithethe ngokungathandabuzekiyo kwaye lingazinzanga. Ngaba ayisiyongcinga iphosakeleyo? Ngaba ikhona inkxaso kule nto? Xa usiva ukuba u-Elon Musk uyayithanda, ngaba ngokukhawuleza ukhalela iindlebe zakho?
Nabani na ofuna ukuvota unakho ukuthabatha inxaxheba kwinkqubo yokwenza izigqibo malunga nokuvunywa kwemithetho nemithetho, kwaye banomhla wokuphelelwa kwayo. Ukuvota kwenziwa ngekhompyuter yakho okanye ngefowuni edityaniswe kuhlobo lokuchongwa. Okokuqala, kufuneka siphinde siqwalasele lonke uluhlu lwemithetho esele ikho: 'ingahlala' okanye 'kufuneka ihambe'. Ewe, ukwenza lula kunye nokwenza lula esikhundleni sobunzima banamhlanje boboya.
Ii-Pro kunye nee-Con's
Oku kukwathetha ukuba kufuneka siqhoboshele i-multinationals ezinkulu kwinkqubo enokuthelekiswa. Emva kwayo yonke loo nto, kufuneka sifune ukususa amandla kubantu abanjengoBill Gates. Ukubuyiselwa okufanayo kwamandla nako kwenzeka apho.
Ii-con's zilula ukudweliswa. Kuya kufuneka sinciphise ubuchwepheshe kunye nedatha enkulu kwaye leyo yindlela esinokuthi siyondle ngayo le nkqubo.
Akunguye u-Elon Musk oyena mntu ufuna ukuxhoma ingqondo yethu efini kwaye uyixhume kwi-AI. Khange abhalise amasango e-paten 2020-060606 ukwenza ubuchopho bethu njengebhlokhi kwibhlokhi? Ewe, kodwa singayivota loo nto. Sinokunciphisa isetekhnoloji kwaye sifuna ukuba abaphuhlisi be-AI banganiki i-AI simahla.
Uninzi lunokukufumanisa kunzima ukubeka wonke umthetho okanye izigqibo phambi kwabantu. Ke abantu banokufumana umsebenzi wosuku kuzo zonke ezo zigqibo de ekugqibeleni bangakhathali. Nangona kunjalo, oko kunokuthetha ukuba abalawuli baxatyisiwe okanye abagwetywa ngokulula kunye nokugcwala endaweni yohlobo lonxibelelwano ngoboya esisetyenziselwa kubo ngoku. Ke kufuneka basebenzise umsebenzi olula kunye ocacileyo kwaye ke kufuneka iintlobo ezahlukeneyo zabaqhubi.
Yintoni ebonakala imbi kufanele ukuba ikhokelele kutshintsho olululo: imigaqo iya kusuka kumanani iye kumgangatho.
Iziphumo eziluncedo kukuba sinokubeka iibhuleki ezikalini kunye nokuhamba phambili kwaye sisuka kubunzima ukuya kokulula. Enye iprojekti kukuba sifumana abameli babantu bokwenyani endaweni yabantu abamele ngasese imali enkulu kunye nesithsaba. Umelo lwabantu kufuneka luphinde lube yintsingiselo yokwenyani yeli gama.
Nantso indlela oyenza ngayo
Siqala ngokuqaba inkqubo yokungahambisani nomgaqo-siseko esikuyo ngoku. Ukungafikeleli kuthetha ukuba kuya ngokuchasene namalungelo asisiseko wabantu.
Umgaqo-siseko utyikitywa sisithsaba, kwaye nemithetho ityikityiwe nesithsaba. Kwingxaki ye-corona, sikubonile ukuba oorhulumente bahlala bewutyeshela umgaqo-siseko kwaye bakhawulezisa ukwenza imithetho emitsha ewisa umthetho-siseko. Kufuneka sibuyele kumgaqo wamalungelo asisiseko kunokuba sisisekelo semithetho. Ngokusekelwe kwilungelo elisisiseko, wonke umntu unamalungelo alinganayo. Kungenxa yoko le demokrasi ngokuthe ngqo isisombululo.
Inyathelo 1 yinkqubo yakudala esekwe kwisithsaba kwaye iyala ukubonakala kwenkululeko. Oko kuthetha ukuthatha isikhundla sokuba igunya esicinga ukuba likho libonisa ukungahambelani nomgaqo-siseko. Akukho nceba kaThixo kwaye kuya kufuneka kufungelwe ukuzithoba ebantwini.
Oku kuthetha ukuba sinokwala isohlwayo, ulawulo kunye nezohlwayo kunye nesikhundla:
Akukho mntu unegunya kum, kuba imithetho nemithetho iphawulwa sisithsaba. Isithsaba eso sibonisa ubabalo lukaThixo. Onke amaziko afana neenkundla, amagunya erhafu, ukuhlolwa, njl njl. Bonke abagwebi, abezopolitiko, umkhosi, amapolisa njalo njalo bafunga ukuthobela isithsaba. Abanalo igunya phezu kwethu.
Ke inyathelo loku-1 ukwala naliphi na igunya, ukwala izohlwayo nezohlwayo kunye nokugatya uxanduva lwerhafu. Kuya kufuneka siyilahle inkqubo yakudala.
Ukuba uza enkundleni, ungamcacisela umgwebi ukuba ufunga ukuba uya kuthobela isithsaba (ubabalo lukaThixo) kwaye ke akanalo igunya phezu kwakho. Ungalatha kumthetho otyhilwe sisithsaba (ubabalo lukaThixo). Ukhululekile ukuba uhambe.
Sakha inkqubo entsha, ngokukhupha isikhalazo esityikitywe ngabantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka apha kule ndawo. Eso sikhalazo sithunyelwa kurhulumente obambeleyo kunye nesithsaba kwaye zithi mabarhoxe.
Siyayeka ukubukela umabonakude, simamela imithombo yeendaba kunye nabezopolitiko, kwaye siyaqonda ukuba imithombo yeendaba kwezentlalo ikwasisixhobo ezandleni zabaphetheyo.
Siyawala amandla orhulumente wasekhaya, owesizwe worhulumente kunye neeBrussels kwaye siqala ukusuka ekuqaleni.
Ezolawulo ziyaqhubeka ukubakho kwaye kufuneka bapapashe ingxelo ngolawulo lwabo lwezezimali. Iinkokheli zezi nkonzo kufuneka zifunge ukuba ziya kuthembela ebantwini kwaye ziqalise kwangoko ukujonga amanyathelo okuthintela inkululeko kunye nemithetho.
ICandelo loMphathiswa Wezimali kufuneka libonise ekuphathweni kweqhosha ngento esembizeni yerhafu kunye nokuba mangakanani amatyala athe afunyanwa.
La matyala kufuneka enqatshelwe kwaye asethelwe kwi-zero. Sitshintshela ngokukhawuleza kwi-bitcoin kwaye siyeke i-euro kunye nedola. Amandla kunye nefuthe leBhanki eyiNtloko yaseYurophu kunye nezinye iibhanki kufuneka ke ziphelelwe. Baye bashicilela imali ngaphandle kwendawo kwaye inkqubo yemali ye-fiat iyabhanga.
"Ityala lesizwe kufuneka laliwe ngokukhawuleza kwaye libekwe zero."
Abantu banikwa ithuba lokuvula i-akhawunti ye-bitcoin ngeveki e-1 kwaye iSebe lezeMali ngokukhawuleza lifaka wonke umntu ngesixa se-1 bitcoin.
I-Bitcoin ibonelela ngokugubungela. Akusekho mali ye-fiat, kodwa yimali entsha egubungele, apho i-bitcoin "yigolide" entsha.
Wonke umntu ufumana umvuzo osisiseko. Oku kuyafana nenkqubo yobukomanisi ngoku esetyenzwa ngoorhulumente, kodwa ngenxa yokuba umgca wamandla ojolise ebantwini kwaye ngqo nedemokhrasi usekwe, umngcipheko woburhulumente obuzinzileyo uyancitshiswa.
Abathengisi kunye neenkampani banikwa inyanga yokufaka inkqubo evumela ukuhlawulwa kwe-bitcoin, kodwa kwamkele ngoko nangoko ukuthengiselana ngokuthe ngqo njengendlela yokuhlawula.
ISebe leZangaphakathi linikwa inyanga e-1 yokuseka inkqubo ye-blockchain ngqo yokuvota, evumela uluntu ukuba lungenise imithetho ebantwini yokwala okanye ukuphononongwa.
I-DigiD inokusetyenziselwa ukuvota, kodwa ngakumbi ukwenziwa kwedijithali ngokubonwa ngobuso okanye isatifiketi sokugonywa kwedijithali sinokuvunywa luluntu.
Yonke imithetho okhoyo ayisebenzi ngoko nangoko. Siza kufaka isigaba sokuphuma kwexesha. Abanyanzeli, iijaji, umkhosi, amapolisa kunye neenkundla zamatyala bayayeka kwangoko imisebenzi yabo.
Icandelo loMphathiswa Wezangaphakathi kufuneka libonise inkqubo yevoti ye-blockchain ingaphelanga inyanga, apho abantu banokuthi batyumbe abameli babo.
Kuya kubakho ummeli omnye okhethiweyo kwinkonzo nganye kwaye lowo unyuliweyo unokunyulwa uninzi lweevoti kwinkqubo yevoti ye-blockchain.
Ezi nkokeli zintsha kufuneka ziqale kwangoko kwaye zinike ingxelo iveki yonke ebantwini ngokunxibelelana ngokuthe ngqo kwiYouTube okanye enye imidiya yoluntu.
Benza ngokukhawuleza ukujonga ubungakanani bemithetho kwaye baqinisekise ukuba umda okhoyo kunye nenani lemithetho iyachithwa kwaye lishwankathelwe kwinani elingaphezulu kwamashumi amahlanu kubulungiseleli nganye.
Imigaqo esisiseko emitsha inikezelwa ebantwini 'njengemithetho yoluntu' ngomgaqo kunye nesishwankathelo samagama ayi-1000.
Abantu banokuvuma, bayale okanye babuyise le 'mithetho yoluntu' ngenkqubo yokuvota ye-blockchain yokuphononongwa kwakhona.
Amajelo osasazo kufuneka ayeke ngokukhawuleza ukusasaza iindaba kunye neenkqubo zokuxoxa. Kufuneka kubekho ixesha elipheleleyo leendaba ngaphandle kokuba abameli babantu abatsha bahlaziye yonke inkqubo.
Kuya kuthi ke emva koko bajongisise yonke inkqubo yeendaba kunye nawo onke amaphephandaba, kwaye baqinisekise ukuba abantu basebenzela indawo endaweni yomyalelo odala osele ugqityiwe.
* umbhalo osemazantsi
Ukuvala ityala lerhafu yinto yethutyana. Kukuyekiswa. Avelaphi onke amashumi ezigidi zabantu bonke abo bafanele ukunceda abantu ngeli xesha lengxaki ye-corona? Le mali ishicilelwe naphi na. Yonke inkqubo yezemali isekwe kwimali ye-fiat (ayigutyungelwanga nantoni na ebonakalayo kwaye eprintwe ngaphandle)
Ewe kunjalo, ukubambezela uxanduva lokuhlawula irhafu akukona kokugqibela. Okwethutyana, de abameli babantu abatsha (abo ke babonakalise abantu ngokwenene) babekwe kwiinkonzo kwaye inkqubo yonke inokucocwa kwaye iphinde isebenze.
Ukupheliswa kwerhafu ke akuyi kuba kokugqibela, kodwa inkqubo kufuneka icocwe ukusuka kumawaka ezigidigidi ahamba e-EU uye kwi-ECB.
Siza kuyisebenzisa njani le nto? Oko kuqala ngesicelo esicacileyo esicacileyo, apho unokuzibonakalisa ukuba ufuna ukuba lutshintsho. Singathetha malunga nokwazi kunye nokuvuka, kodwa kuphela kwenguqu evela isenzo. Funda amanqaku asuka kuxwebhu lwezikhalazo apha uze uphose ivoti yakho. Sisonke kuphela esinokuthi senze inguquko kwaye oko kuqala ngemizamo yethu.
Ngesi sikhalazo sibhengeza:
Ukuba isithsaba asinamandla
Ukuba urhulumente makayibeke kwangoko imisebenzi yakhe
Ukuba yonke imithetho nemigaqo ingasebenzi kwangoko kwaye ihlaziywe
Ukuba konke ukunyanzeliswa kuyanqunyanyiswa kwangoko
Ukuqokelelwa kwerhafu kuyamiswa kwangoko
Isohlwayo asivumelekanga kwaye ingqokelela iyanqunyanyiswa
Ukuba amapolisa, ezomthetho, umkhosi, abagwebi, abagwebi, abahloli kunye nabo bonke abasebenzi bakarhulumente kufuneka bafunge ukuthobeka ebantwini
Ukuba ityala likazwelonke alisebenzi
Ukuba amabango entlawulo e-ECB kunye nawabanye ababolekisi ayisebenzi
Ukuba kuya kubakho idemokhrasi ethe ngqo (njenge ichazwe apha)
Ngesi sikhalazo sifuna:
Ukupheliswa kwangoko kwemisebenzi kakumkani, ukumkanikazi, amalungu amagumbi okuqala nawesibini kunye namalungu ekhabinet
Uphuhliso oluthe ngqo-kunye nokuhanjiswa kwinyanga enye-yenkqubo yokuvota ye-blockchain liCandelo lezeMali, apho abameli abatsha banokuchongwa (umntu ngamnye oza kubhala inkonzo nganye, ukuba atyunjwe kwaye avotelwe ngenkqubo yokuvota)
Ukuba iSebe lezeMali lifaka isixa semali enye kwi-1 ye-bitcoin ngaphakathi kwe-Netherlands
Ityala loluntu ngesithsaba kunye nabezopolitiko ngenkqubo ye-blockchain yokuvota, kubandakanya ubungakanani kunye nomxholo wesigwebo
Ke yiya kwiwebhusayithi entsha ngoku, utyikitye uxwebhu lwezikhalazo kunye / okanye ube lilungu:
ngqo kwintando yesininzi ngoku
Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu olunesiqingatha semitha kunye nokungeniswa kweapps
Ikhabhinethi yeRutte III yentando yesininzi ayisekho
Ividiyo kaGqr Plandemic UJudy Mikovits luhlobo lomsitho wama-201 uhlobo lweendaba zomgunyathi (ividiyo)
I-Microsoft patent 2020-060606 edibanisa ubuchopho bomntu kwinkqubo yentlawulo ye-crypto
Ukubiza wonke umntu: vukela! Abanyanzelisi: Yiyeke indlela oziphethe ngayo ngokungekho mthethweni!
tags: blockchain, intlekele, isithsaba, wentando, ngqo, eziziimbalasane, ntsimini, abaphathiswa, isikhalazo, bezopolitiki, kwezopolitiko, kuvota, te knoloji, utshintsho
Malunga uMbhali (Iprofayile yoMbhali)
I-URL yokulandelela | Iikhompyutheni ze-RSS Feed
XanderN wabhala wathi:
12 Meyi 2020 kwi-21: 57
Ndibona oku ngakumbi njengengcinga yokuba injongo yokuphela kufuneka iphakanyiswe ngakumbi, hayi into eza kwenziwa ngokukhawuleza. Iitayile ziqinisekisiwe, ukuba uyayenza le nto. Misa irhafu? Masibeke nje isigidi sabasebenzi bakarhulumente ngaphandle komsebenzi, iiprojekthi ezininzi ezisebenza ngamakhulu amawaka abantu ziya kuza kumisa, indiza enkulu iya kuqala (ngaphandle kokuba ilizwe lonke lithathe inxaxheba ngaxeshanye), njl njl.
Utshintsho lwamanyathelo ngamanqanaba ngamanyathelo abonakala kum kunokwenzeka ukuba aphumelele. Kuya kufuneka kuqala ugqithise ngokupheleleyo ukubonelelwa ngolwazi, okt. Ukuba abantu kufuneka benze isigqibo kuyo yonke into, kuya kufuneka uqiniseke ukuba bafumana ibali elinyanisekayo malunga neendlela ezilungileyo nezingalunganga kwisigqibo ngasinye. Kodwa ndoyike ngokunyaniseka indalo yabantu, ephambuke kuzo zonke iintlobo zotshintsho, kwaye i-emo ibuthathaka kakhulu. Ungaqiniseka ke ukuba, umzekelo, indlela entsha kufuneka yakhiwe kwenye indawo, kwaye bafumane abantu phambi kwekhamera abakhalaza ukuba le ndlela ikufutshane nezindlu zabo, okanye kwisiqithi sehlathi, abangama-90 kwezili-100. abantu bazakuvota NGOKU.
Kwaye kuya kuba njalo ngeeprojekthi ezininzi, ndiyacinga. Ndiyoyika ukuba emva koko ayizukuphinda iphume emhlabeni, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuphelela kwinkqubo yobukomanisi eya kufana kakhulu neSoviet Union, exhaswa ngetekhnoloji ethe xhaxhe. Andicingi ukuba lelo lilizwe elingcono onokuphila kulo.
Ndicinga ukuba, njengawe, ukuba le nkqubo yangoku inalo ixesha elilungileyo, kwaye iye yajongelwa phantsi yinkohlakalo, ucalucalulo kunye nazo zonke iintlobo zamaqela okulinda anikwe amandla amakhulu kakhulu. Intsapho yasebukhosini ikwimeko nayiphi na indawo indala kakhulu (nangona i-wmb isenokuhlala njengohlobo 'lwenkonzo' yeNetherlands-Ukukhuthaza okanye i-Folklore okanye into, kodwa ihluthwe onke amandla). Ke ngoko kufuneka yahluke, kodwa ke ndisasaza oko malunga neminyaka eli-10 okanye engaphezulu, endicinga ukuba ikhawuleze kakhulu, ngenxa yokuphucuka okukhulu okwenzekayo. Umntu, abantu, kufuneka akwazi ukujongana nale nto ngokwengqondo.
UMartin Vrijland wabhala wathi:
12 Meyi 2020 kwi-22: 40
Ukucaca: Uxanduva lwerhafu lwethutyana.
Avelaphi onke amashumi ezigidi zabantu bonke abo bafanele ukunceda abantu ngeli xesha lengxaki ye-corona?
Le mali ishicilelwe naphi na. Yonke inkqubo yezemali isekwe kwimali ye-fiat (ayigutyungelwanga nantoni na ebonakalayo nangoshicileloweyo)
Ewe kunjalo, ukubambezela uxanduva lokuhlawula irhafu akukona kokugqibela. Kungenxa yoko le nto isithi 'ukunqunyanyiswa'. Okwethutyana, de abameli babantu abatsha (abo ke babonakalise abantu ngokwenene) babekwe kwiinkonzo kwaye inkqubo yonke inokucocwa kwaye iphinde isebenze.
Ukupheliswa kwetyala lerhafu akufuneki kube yinto yokugqibela, kodwa kuya kufuneka kucocwe ukusuka kumawaka ezigidi zokuhamba ukuya kwi-EU ukuya kwi-ECB.
Cinga ngayo kwakhona.
12 Meyi 2020 kwi-22: 53
Inkcazo elungileyo malunga nemali ye-fiat (ukubamba ixesha elincinci)
12 Meyi 2020 kwi-22: 58
Kwaye oku kusaqhubeka
12 Meyi 2020 kwi-23: 06
Kwaye ukuba ndiyinyanisekile, andikholelwa kwinguqulelo yamanyathelo ngamanyathelo. Yonke inokuba yinto enkulu kwaye kufuneka yenziwe ngokukhawuleza. Into ebalulekileyo kule nto kukuba imigca yamandla kufuneka ibuyiselwe ukusuka phezulu ukuya ezantsi. Abantu kufuneka bathethe ngokuthe ngqo kwaye le nkqubo kufuneka iphindwe kabini. Ukwenza lula kubalulekile.
SalmonInClick wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-00: 59
Martin, ukuba ndiyakuqonda ngokuchanekileyo uchaza indlela ehambelana nezinto ezinqumamisa umgaqo-siseko okhoyo "egameni laBantu". Oku ke kuthetha ukupheliswa kobukhosi bumgaqo-siseko, obumelwe yipalamente yedemokhrasi. Ke iRiphabhlikhi…
Ewe bendihlala ndicinga ukuba yinkqubo engaqhelekanga egcwele izinto eziphikisanayo. Ngexesha leeklasi zeeSocial Study kwiGymnasium, ootitshala behlala befanele ukuphendula umbuzo olula "Ingabakho njani into yedemokhrasi ukuba (urhulumente) amagosa afunga ngokuthobela isithsaba?" Apho ndingajonga khona ipaseji .. incinci itshintshile kulohlonipho.
iifom wabhala wathi:
12 Meyi 2020 kwi-23: 35
Iinkampani ziya kufuneka zithathe inxaxheba kuthotho olunje kwaye ngakumbi kwicandelo lezemali. Apha nathi sinokubuyela kwinkqubo apho abagcini beedola kunye nabanini mgaqo-nkqubo baba ngabanini. Ukuvota kwimizekelo yeebhonasi, imigaqo-nkqubo yomvuzo kunye neminye imibandela ebalulekileyo ke kungenziwa nge-blockchain. Emva koko, amanye amacandelo anokuguqulwa. Enye yeengxaki ezikhoyo zangoku kukuba isibakala esikhulu sokwenza isigqibo sikarhulumente. Ndicinga ukuba oku kufanele ukuba kusonjululwe kwinqanaba 1.
guppy wabhala wathi:
12 Meyi 2020 kwi-23: 54
Isisombululo sakho sisisombululo esifanelekileyo ngetekhnoloji yangoku. Kodwa ndiyabuza ngokuqinisekileyo ukuba eli xesha lobuchwephesha liza kuhlala ixesha elide. Sele silubonile kwangaphambili usengaphambili. Indalo yonke iya kuqinisekisa ukuba yonke into isethwe ngokutsha. I-satonites zika-Elon ziya kuyeka ukusebenza, i-intanethi iya kuhla, abantu kuya kufuneka babuyele kwiziseko. I-Egoism ayizukuphila ngamanqanaba aphezulu.
Sele sikwinqanaba apho siyayazi imeko. Sigxeka abanye kodwa siyahlawula thina. Sonke sineenkqubo zokusebenza kweMicrosoft kwiikhompyuter zethu. Sonke sihlawula irhafu exhasa uWilly, Rutte kunye neemfazwe.
Kufuneka sivume ukuba sinetyala kwaye size nezisombululo ezinje ngawe ngendlela esinokuzibuyisela ngayo izinto ngokwethu.
Unyanisile, kuxhomekeke kuthi. Injongo yobukho bethu kukuba sizenzele umsebenzi. Yonwaba kwaye unombulelo kuwe kunye nomphefumlo wakho kwaye uvumele umphefumlo wakho ulawule i-ego yakho.
Ukuba awuzilongi, omnye umntu uza kuyenza!
14 Meyi 2020 kwi-00: 57
Ngokwenene kukho imizekelo eliqela apho ii-asethi ezicwangcisiweyo sele zikhetha ukwahluka kwe-analog ukongeza okanye njengokutshintsha kwidijithali.
Ikhamera 2 wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-09: 20
Ayinakunceda kodwa ndiyavuma
kodwa sizothatha nabani.
Abahambi ngokuzithandela kwaye nephepha le-A4 eligcwele zizicelo?
I-squown ye-Crown kufuneka iqale yazi, yeha, ewe
13 Meyi 2020 kwi-09: 30
Into enomdla kukuba abantu bangathanda utshintsho, kodwa abakholelwa ukuba kufanelekile ukuba silutshintsho.
Ungakunyanzela oku ngokuseka imodeli yedemokhrasi ngqo. Oko kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze ngokwakho.
Sikhalaza sithi akukho nto bayenzayo kwi-The Hague. Sikhalaza ngezimvo ezinje: "Aphi amaqela aphikisayo!"
Olona tshintsho lokwenyani lunako kwaye kufanele ukuza ngokuzivuselela ngokwakho. Oko kuphuma kulinyathelo elikude kakhulu kwabaninzi.
Sifuna ukufunda okubi malunga nokuvalwa, kubi ngogonyo kwaye kubi malunga neBill Gates, kodwa ukukuvula ngesiquphe linyathelo elisekude kakhulu.
13 Meyi 2020 kwi-09: 47
Kubalulekile ukuqonda imigaqo esisiseko yemali ekhuselekileyo. Unemali engakhuselekanga eprintwe ingenamda kwaye ungatyhilekanga (njengoko kunjalo ngexesha lentlekele) kwaye oko kubangela uxinzelelo (olubizwa ngokuba 'yimali ye-fiat') okanye unemali edityaniswe nomgangatho, njengegolide okanye ioyile. Umgangatho weoyile we-OPEC sele wehle, amaxabiso eoyile aba mbi. Umgangatho wegolide wakhutshwa kwiminyaka eyadlulayo. I-Bitcoin ibonakala ingumgangatho omtsha.
Kuphinde kubekho ubungozi bokufakwa kwidijithali, ukudityaniswa kunye ne-AI, kodwa kwinkqubo ebonakala ngathi inokuphelisa kwaphela, unokuguqula iphiramidi yamandla.
Nantsi inkcazo yokuba isebenza njani "imigangatho yegolide":
13 Meyi 2020 kwi-09: 57
"Imali yeFiat" okanye "imali ethembekileyo" yimali engafumani xabiso layo kwizinto ezenziwe ngayo (ixabiso langaphakathi njengakwigolide nakwisilivere), kodwa ngokuzithemba ukuba ingasetyenziselwa ukuthenga iimpahla neenkonzo. Ixabiso legama alisekelwanga kubunzima obuthile kunye nomxholo wesinyithi exabisekileyo, kodwa kukuzithemba kokuba abaqhubi bezoqoqosho babeka ixabiso lemali.
Ngeli xesha leengxaki zekorona, imali ye-fiat ikhawuleza iphele. Le yimeko engazinziyo.
Ilanga wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-11: 29
Kukho unxibelelwano ngqo phakathi kwemali kunye namandla. Ngaphandle komkhosi wase-US kunye nesakhono sokuthatha isigqibo malunga neemfazwe, idola ibingayi kubaxabisa. Kwaye ngokuqinisekileyo ukuvuma komkhosi waseMelika, amajoni, ukugcina i-hegemony yaseMelika kwiidola.
13 Meyi 2020 kwi-10: 09
Jonga ngezantsi ngasekunene kuthengiswe kangakanani igolide, isilivere kunye ne-crypto (kwiphepha). Oku kuthetha ukuba, umzekelo, abantu abayi-173 bathi ibango le-1 lesilivere, bali-172 bathenga umoya. Ixabiso elifanelekileyo lesilivere eMelika yi- $ 2615, ixabiso elifanelekileyo ledola ngu-
IBass Ruigrok wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-12: 36
I-National Socialism idale inkqubo yemali yasimahla egqiba ityala loluntu kwaye yagxotha iibhanki….
Yiyo loo nto ubuxoki obungapheliyo malunga neJamani yeSocialism.
Khawufane ucinge ukuba uya kuba yintoni umsindo xa abantu beqonda ukuba eyona nkqubo ilungileyo itshatyalalisiwe ngabo babizwa ngokuba lixhoba.
Ngaphezulu nangaphantsi, okuhle kubi, umenzi wobubi ulixhoba.
Into efanayo uGhadaffi noSaddam Hussein bazame ukwenza ...
Future wabhala wathi:
13 Meyi 2020 kwi-16: 22
Umbuzo kukuba, ngaphezu kwayo yonke loo nto, uza kuwafumana njani amapolisa kunye nabasebenzi basemkhosini. Kuya kufuneka uyifumane nale. Andizange ndiqonde ukuba kutheni ungambulala umntu njengejoni. Emfazweni ongasaziyo nesona sizathu soko. Imiyalelo kunye naphantsi kweziphoso zobuxoki ze.
Ndisakwazi ukuvumelana namapolisa, kodwa nokuba abaphathi bakho bathe mabakuthathe umboniso. Mna nakweliphi na ilizwe.
Ngapha koko, bendicinga, kwaye nawe utyhile. Jensen nje freemason. Ke i-1 yazo, ndiyibukele kumnandi xa usitya. Kodwa loo mfo ngokwenene ayihambelani kwibali lakhe. Qhubeka nokuziva unovelwano ngeTrump.
Ke ibali laso Akukho sitayile alisavumeli igama laso kwizenzo zabantu. Kwaye kuya kufuneka ubhale uJansen okanye uJensen ulapho angama-33. Ngokuqinisekileyo kugqityiwe, kwaye kwakhona sisidenge. UJensen kuthiwa uvalwe yi-GS. Kodwa nika uJensen 33 abe ngumzekelo. Kwaye uthatha ibutho lonke kumgibe wakhe. Kananjalo ividiyo esusiweyo enokubukwa okumalunga ne-180.000, funda inani le-masonic 9. Kwaye zonke ezo zinto zisenziwa ngesandla azilolize. I-Scary boy so Etc njl.Bukhali kwaye ngokukhawuleza ubonwe kuwe.
Cubungula wabhala wathi:
16 Meyi 2020 kwi-09: 22
banokubeka eso sisa sikaThixo kwindawo apho ilanga lingakhanyi. Ihlala ithiyetha kubantu abangazi nto ..
16 Meyi 2020 kwi-23: 14
Kanye njengoKumkanikazi wamisa iPalamente yase-Bhritane ngo-Agasti ka-2019, eyayithengiswa yimithombo yeendaba njengo-Boris Johson owacela imvume ukumkanikazi. Nangona kunjalo, kumgaqo-siseko wase-Bhritane, i-monarch inayo (eyodwa) amandla agciniweyo xa inkosi icetyiswa libhunga labucala.
17 Meyi 2020 kwi-13: 23
"Umthetho oqhelekileyo" ovela kubantu abaqhelekileyo (oomama ababalekiyo), ukumkanikazi ungaphezulu komthetho kunye ne-idd kulawulo lwe-Commonwealth (Canada, Australia, NZ njl. Njl.). Njengoko iMadurodam isengukumkani nje womgaqo-siseko kunye nepalamente (ethetha ngegugu) yethiyetha.
Riffian wabhala wathi:
16 Meyi 2020 kwi-14: 44
Kutheni ufuna ukwazi oku? wabhala wathi:
18 Meyi 2020 kwi-13: 49
Umdlalo bhanyabhanya omnandi kwaye ochukumisayo. I-heroine ephantse yandise ngokwenyani oko bekule webhusayithi iminyaka. Phantse ngokoqobo, kuba iphinda ibize "amandla aphezulu" ukuba atshintshe.
Eli nenekazi lisenokuba neyona njongo iphambili, kodwa ngelishwa intetho yalo engemva kwayo ayizukutshintsha nto kwiziko apho inike le ntetho.
Njengoko uMartin echaza, utshintsho lokwenyani luvela ngaphakathi. Ukuba intetho yeli nenenekazi livela kuye, kulungile ukuba abe ngummeli ngaphakathi kwenkqubo entsha echazwe apha ngasentla
Kufuneka ungene ngemvume ukuba bakwazi ukuthumela ingxelo.
« Ividiyo kaGqr Plandemic UJudy Mikovits luhlobo lomsitho wama-201 uhlobo lweendaba zomgunyathi (ividiyo)
Ukuthoba okukhulu kwexabiso lemali ngexesha lengxakeko ye-corona kukhokelela kwisiphumo se-hyperinflation: ngaba i-bitcoin isisombululo? »
Joyina i-BATTLE kwaye ukhethe apha
IZITHULELO JULAYI 2017 - FEB 2020
> Ukutyelelwa lilonke: 16.768.413
IZITHULELO PER 18 FEB 2020
Utyelelo lulonke: 2.510.222
ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
Amandla otshintsho aqala ngokuphalaza uloyiko, inkqubo kunye nokukhohlisa okungendawo kwaye iguqukele enguqukweni lokwenyani
I-iPhone ifihla i-covid-19 yohlaziyo kuhlaziyo lwe-I-OS 13.5
UMaurice de Hond ufumana umthetho ongenaqingatha kunye neemayile (ividiyo)
Bangaphi abantu baseDatshi abanokuhlawula amatyala abo ngexesha lentlekele ye-corona?
Ukusongelwa ngebhombu op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
Ikhamera 2 op Amandla otshintsho aqala ngokuphalaza uloyiko, inkqubo kunye nokukhohlisa okungendawo kwaye iguqukele enguqukweni lokwenyani
isilumko op I-iPhone ifihla i-covid-19 yohlaziyo kuhlaziyo lwe-I-OS 13.5
Cubungula op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
Oxel op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
Faka idilesi yakho ye-imeyile ukuze ubhalise kwaye ufumane i-imeyile ngokukhawuleza kunye nenqaku elitsha. Unokuqakraza kwi-bell eluhlaza ukuze ufumane umyalezo oshukumisayo kwifowuni yakho, i-pad okanye ikhompyutha.
INGXELO YENKQUBO YOKWENZA I-AVG
FUNDA INKCAZELO YENKQUBO
© 2020 uMartin Vrijland. Wonke amalungelo agcinwe. Umxholo nguSolostream.
Ngokuqhubeka usebenzisa isayithi, uyavuma ukusebenzisa ikhukhi. olunye ulwazi
Izicwangciso zecookie kule website zilungiselelwe ukuba 'vumele ikhukhi' ukukunika ithuba elifanelekileyo lokuphequlula. Ukuba uqhubeka usebenzisa le website ngaphandle kokutshintsha izicwangciso zakho zecookie okanye ucofa "Yamukela" ngezantsi uze uvume ezi zicwangciso.